Yazi into Pla of 3D izinto eshicilelweyo - China Cixi Lanbo Printing
ABS olulingana / 1,75 / 1kg
ABS intambo /1.75/ 2kg
ABS intambo /2.85/ 1kg
ABS olulingana /3.0 / 1kg
Pla olulingana / 1,75 / 1kg
Pla olulingana / 1,75 / 2kg
Pla olulingana / 2,85 / 1kg
Pla intambo /3.0/ 1kg
spool neziselubala Pla
Yazi into Pla kwezinto 3D eshicilelweyo
abathengi kunye nabahlobo abaninzi undibuze ukuba Pla yiplastiki? Nantsi intetho rough malunga oko Pla namhlanje.
Pla ke basisishunqulelo IsiNgesi of polylactic acid, esibhaliweyo ngolu hlobo: polylacticacid. Polylactic acid (Pla) kuyinto inoveli biobased kunye nezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ezenziwe ngezinto starch ekrwada ecetywayo yimithombo sisityalo ehlaziyekayo ezifana nombona. Istatshi izinto ekrwada efunyanwa saccharification ukufumana iswekile, uze glucose kunye ubunzima athile inegwele ukuba oluyi-ngobunyulu lactic acid, kwaye ke kukho ubunzima molekyuli polylactic acid ezithile kuhlelwe yi yokuqaphela imichiza. It has biodegradability elungileyo. Emva kokuzisebenzisa, oko kuthotywa ngokupheleleyo amagciwane kwindalo phantsi kweemeko ezithile, yaye ekugqibeleni luvelisa icarbon dioxide namanzi, engaquki zingcolise okusingqongileyo. Oku kuluncedo kakhulu okusingqongileyo kwaye ithathwa njengento indalo.
Le ngxelo wagqiba ukuba iziphumo ilothe, mercury, isiqalelo esithambileyo esimhlophe, chromium, biphenyl, kunye diphenyl kaEtere baba kuhambelana kunyaka-11 EU umyalelo malunga nokusetyenziswa kweziyobisi ezithintelweyo, kunye neziphumo sample 001 zange andibhaqwa. ND ayikho dected.
Zonke iisaveyi ngasentla zibonisa ukuba Pla kuyinto material elungileyo, kodwa ukhuseleko lokutya ngokwenene into ekhathaza kakhulu wonke umntu, okanye lumka.
Makhe sithethe ngezinto ezithile neentsilelo kunye neengozi efihlwe Pla. Okokuqala, Pla ayikho ayinyangeki lobushushu eliphezulu, yaye ngokusisiseko iqale ukugqabhuza 60 °. Njengoko ndlu ukutya, kufuneka ube kubanda ngayo; impahla Pla unako kuthotywa, nto leyo inzuzo kunye engxakini. Nangona imvelo, ifuna yoshicilelo 3D izinto imveliso-grade. Ixesha elide i ibhodi emfutshane; kwinkqubo wokushicilela, kuba le-lobushushu eliphezulu yokunyibilika, kuya kukhusela amasuntswana, nangona amasuntswana ngokwabo non-ezingenabungozi, kodwa lena inkulwlana efana PM2.5, ukuphefumla ixesha elide okanye umonakalo emiphungeni zabantu, ngoko ke, isithuba yoshicilelo 3D sele kukhethwa umoya.
Ngoko ke, Pla yi izinto nokusingqongileyo ukuba wonke umntu ayisebenzise ngokuzithemba.
mshini dumpling lazy
Ekugqibeleni ememeza amazwi, iteknoloji litshintsha ubomi, 3D ushicilelo ukusuka amaphupha engokoqobo!
ixesha Post: Aug-16-2018